कठै बरा खाना खाएर एक्कासि बिरामी भएका रमेश लाउँ-लाउँ खाउ-खाउ भन्ने उमेरमा सधैंका लागि अस्ताए ! – Paluwa Khabar
कठै बरा खाना खाएर एक्कासि बिरामी भएका रमेश लाउँ-लाउँ खाउ-खाउ भन्ने उमेरमा सधैंका लागि अस्ताए !
बैसाख १२, २०७८ आइतबार 57
भावपुर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली
कैलाली ” जिल्लाको मोहन्याल “गाउपालिका6अजिङ्गरे हुँदै हाल कैलाली को लम्की चुवा नगरपालिका6बागमारा मा बस्दै आउनु “भएका माने बोहोरा को जेठो छोरो रमेश बोहोराको असमायिक नि’धनको भएको ले निकै स्तब्ध भएको छु नाति “को आत्म चिरशान्तीको कामना गर्दै , सम्पुर्ण “परिवारजनमा गहिरो “समवेदना” प्रकट गर्दछु !!!
***यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
भारतमा विगत केही दिनदेखि दैनिक ३ लाखभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिइरहेका छन्, यो विश्वकै उच्च रेकर्ड हो । सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा तीन लाख ४७ हजार ७८६ जना सङ्क्रमित भएका छन् ।
यो सङ्ख्या कोरोनाभाइरसको म’हामारी सुरु भएदेखिकै सवैभन्दा धेरै भएको पनि अधिकारीहरुले जनाएका छन् । एकै दिन यति धेरै संक्रमित संख्या विश्वमै पहिलो भएको समाचारमा जनाइएको छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पछिल्लो एक दिनमा दुई हजार ६२४ जनाको मृ’त्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
अस्पतालहरुमा बि’रामीलाई बे’ड पाउन मुस्किल छ । संक्रमितसँगै मृ’तकको संख्या पनि बढिरहेको छ । जसकारण, दिल्ली र मुम्बईका म’सानघा’टहरुमा श’व ज’लाउने ठाउँ पाउन पनि मु’स्किल छ । भारतमा पछिल्लो समय दैनिक २ हजारभन्दा धेरैको मृ’त्यु भइसकेको छ ।
योसँगै भारतमा कोरोनाभाइरसबाट अहिलेसम्म कुल एक लाख ८९ हजार ५४४ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा अहिलेसम्म कुल एक करोड ६६ लाख १० हजार ४८१ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पाइएको छ ।कुल सङ्क्रमित मध्ये २५ लाख ५२ हजार ९४० जना अझै पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
त्यसैगरी अहिलेसम्म एक करोड ३८ लाख ६७ हजार ९९७ जना सङ्क्रमणमु’क्त भइसकेका छन् । ती मध्ये दुई लाख १९ हजार ८३८ जना पछिल्लो एक दिनमा स’ङ्क्रमणमुक्त भएका हुन् । भारतमा गत जनवरी १६ देखि कोरोनाभाइरस वि’रुद्धको खो’प अभियान चलिरहेपनि भाइरसबाट सङ्क्रमित र मृ’तकको सङ्ख्यामा दिन प्रतिदिन बृ’द्धि हुदै गएको छ ।
Prevभाग्यमानीले मात्रै देख्ने जिउदो दाहिने शंखको महिमा पुरा पढी ॐ लेखि शेयर गर्नुहोस 24 घन्टा भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ
Next९ लाख ब´लेको ब´त्तिलाइ द´र्सन गर्नुहोस र ॐ लेखी सेर गर्नुहोस आफू कसरी धनी बन्न सकिन्छ पढ्नुहोस।
प्रधानमन्त्रीले मेरो राजीनामा माग्नुभो — वर्षमान पुन
गोंगबुमा यसरी ट्या’क्सीमा आ’गो लगाए ; प्रत्यक्ष भिडियो हेर्नुस
रुकुम पश्चिमका काेराेना संक्रमणका कारण पहिलोपटक एक जनाकाे निधन